Madaxweynaha Puntland oo tababar u soo xiray cutubyo katirsan ciidanka badda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo tababar u soo xiray cutubyo katirsan ciidanka badda
June 25, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne oo shahaado guddoon siinaya mid kamid ah ciidamada dhammeystay tababarka. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah tababar u soo xiray cutubyo katirsan ciidanka badda.
Cutubyadan oo katirsan ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa muddo lix bilood ah tababaro ku qaadanayay magaalada Boosaaso, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland.
Ciidanka badda Puntland oo ah kamid ah ciidamada ugu tababarka iyo qalabka fiican Soomaaliya ayaa waxaa taageera Dowladda Isutaga Imaaraatka Carabta.
Markab kiimikada qaada oo marayay biyaha Soomaaliya oo iska difaacay weerar burcadbadeed
Boosaaso-(Puntland Mirror) Koox looga shaki qabo burcadbadeed Soomaali ah ayaa weerar ku qaaday markab kiimikada qaada shalay oo Jimce ahayd balse waxaa iska difaacay ilaaladii saarnaa markabka, sida ay sheegeen Ciidamadda Badda ee Midowga [...]